Featured – စာမကျြနှာ 133 – Healthy Life Journal
ကျော်ကြားသူတို့၏ ကျန်းမာလှပလူမှုဘ၀ ပိုင်ဖြိုးသု
တစ်နေ့တာ အသားရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ . . . အဖုအပိမ့်ထွက်လွယ်တဲ့ အသားအရေဖြစ်လို့ သဘာဝကုထုံးတွေကိုအဓိကသုံးဖြစ်တယ် . . . ညီမက Facial Formနဲ့ သစ်တယ်။ ပြီးတော့ Moisturizerထပ်လိမ်းတယ်၊ Estelauderကထုတ်တဲ့ Lotionလိမ်းပါတယ်။ ညဘက်ဆိုရင်တော့ Estelauderကထုတ်တဲ့ Night...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်က အွန်စော. .
ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းကျော် ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည် “ဟဲ့ . . ဒါ ငါတို့ သူငယ်ချင်းသဲဆု မဟုတ်လား . . ဒီမိန်းမ ဘာတွေလျှောက်တင်နေပါလိမ့်.. ဒီမှာ ကြည့်စမ်း . .သင်း” သဇင်ရဲ့...
ကျော်ကြားသူတို့၏ ကျန်းမာ၊ လှပ၊ လူမှုဘ၀
အဆိုတော် ချမ်းချမ်း နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း တစ်နေ့တာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ အမရဲ့ တစ်နေ့တာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံက Lotion ကို ပုံမှန်လိမ်းတယ်။ တစ်ခါတလေ ရေချိုးခါနီး Scrub(ကြေးချွတ်)လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်လတစ်ကြိမ် Hello Beauty Spaမှာ ပေါင်းသွားတင်ဖြစ်ပါတယ်။...
ကင်ဆာ လူနာတို့အတွက် ကောက်ရိုးတစ်မျှင် . . .
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀၁၅ ဇူလိုင်လတွင် ထူးဝါဖော တစ်ယောက် ဗိုက်အောင့်ဝေဒနာ စတင် ခံစားခဲ့ရသည်။ ဗိုက်အောင့်သည့် ဝေဒနာကို ပျောက်နိုးပျောက်နိုး စောင့်ကြည့်နေခဲ့သော်လည်း တဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာသည်မှာ နောက်ဆုံး မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာတော့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဖောင်ကြီးမြို့တွင်နေသည့် ထူးဝါဖောသည် နီးစပ်ရာ ဆရာဝန်ထံ...